Olona telo voasambotry ny zandary… : basy, bala marobe, kojakoja fanamboarana basy sarona | NewsMada
Olona telo voasambotry ny zandary… : basy, bala marobe, kojakoja fanamboarana basy sarona
Nahitam-bokany indray ny ezaka ataon’ny zandarimariam-pirenena manoloana ny ady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana. Ny zoma 4 novambra 2017 lasa teo, olona telo nahatrarana basy miisa sivy sy bala miisa 24 miampy ireo kojakoja fanamboarana basy…
Tena efa mahavita ary mitovy amin’ny fitaovam-piadiana fampiasan’ny mpitandro filaminana mihitsy ny zava-bitan’ireto telo mpanamboatra basy tratran’ny zandary ireto. Tao amin’ny kaominina ambonivohitra sy distrikan’i Sambava no nahatrarana azy ireo. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, noho ny fikaroham-baovao nataon’izy ireo, re fa misy olona manamboatra sy mitazona basy tsy ara-dalàna ao an-tampon-tanànan’i Sambava. Niroso tamin’ny fikarohana avy hatrany ny zandary ka nosavaina ny tranon’ireo ahiahina ho tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. Noraisim-potsiny tao an-trano ireo olona telo voarohirohy ireo niaraka tamin’ireo fitaovam-piadiana marobe.
Basy lava miisa telo sy basy PA miisa enina miaraka amin’ny bala miisa 24 (ny 13 vodim-bala) ireto tratran’ny zandary ireto. Nogiazan’ny zandary avy ao amin’ny GAPJ Sava sy ny kaompania Sambava izay manao ny fanadihadiana ity raharaha ireto fitaovam-piadiana ireto. Nanamafy hatrany koa ny zandary fa mitohy ny fikarohana ireo olona ahina ho mpiray tsikombakomba amin’ireto voasambotra ireto.
Basy nasitrika tao anaty gonin-tsaribao…
Voasambotry ny zandary tao Sakaraha, ny 6 novambra 2017 teo ireo telo lahy niaraka tamin’ny basim-borona miisa telo. Nahazo loharanom-baovao ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Mahaboboka momba ny fisiana andian’olona mikasa hitondra basy amin’ny taksiborosy eny amin’ny toby fiantsonana tamin’io andro io. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary ka nanao ny fanaraha-maso ary nisava ny entan’ireo mpandeha.
Hita nasitrika tao anaty gonin-tsaribao iray tokoa ireto fitaovam-piadiana ireto ka tratra teo koa ireo telo lahy tompony. Voalazan’izy ireo nandritra ny famotoran’ny zandary fa saika hiakatra aty an-drenivohitra izy telo lahy kinanjo tratran’ny zandary tampoka.
Nentin’ireo zandary nihazo ny borigadin’i Sakaraha anaovana fanadihadiana izy telo lahy voarohirohy ireto.
Nilaza ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa tsy ny fiatrehana ny asan-jiolahy ihany no asan’ny ataon’ny zandarimariam-pirenena fa eo koa ny fisorohana ny mety hitrangan’izany.